ပသိ ရေလှောင်တမံမှ တောင်ငူဒေသရှိ နွေစပါး စိုက်ဧက ၁၅၀၀ ကို စိုက်ပျိုးရေဖူလုံစွာ ပေးဝေ၍ ပိုလျှံသော ဆည်ရေဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားထုတ်ယူရန် အချင်း ပင်မ ၁၀ ပေ၊ စက်ရုံအ၀င် ၆ ပေ၊ အလျား ပင်မ ၇၆၅ ပေ၊ စက်ရုံအ၀င် ၁၀၅ ပေရှိ ဖိအားမြှင့် ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်စက်အင်အား (၁)မဂ္ဂါဝပ် စီရှိ ကက်ပလန်တာဘိုင် (အလျားလိုက်ဝင်ရိုး) တာဘိုင်အမျိုးအစား စက်နှစ်လုံး တပ်ဆင်ကာ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီ ရှစ်သန်း ထုတ်လုပ်၍ ၃၃ ကေဗွီ ဓါတ်အားလိုင်းဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်မြို့နယ်သို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပို့လွှတ်ဖြန့်ဖြူး သွားရန်နှင့် ပိုလျှံသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို တောင်ငူ ဒေသအတွင်း ဖြန့်ဖြူးသွားရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Like this:Like Loading...
This entry was posted on Monday, January 7th, 2008 at 11:34 am and is filed under ပသိ (Pathi).	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.